Isticmaalay gawaarida yaryar | January 2020
Diido: degitaan, daryeel, faa'iido iyo waxyeelo
Ugu Weyn Ee Isticmaalay gawaarida yaryar
Sidee loo sameeyaa qalab yar-yar oo guriga lagu dhejiyo oo leh jajab shisheeye adiga ayaa sameeya
Beeraha yaryar ee yaryar ee tareenka ah ayaa ah xulashada ugu fiican marka la dooranayo qalabka wax lagu shaqeeyo. Qiimaha qalabka cusub ee warshadaha ayaa sarreeya, fursadaha la isticmaalay mar walba lama heli karo. Xaaladdan, naftaada naftaada ka caawi ururinta. Gawaadhida yaryar ee iskood u samaysan oo leh shandad jajab ah ayaa aad loogu jecel yahay beeralayda.
Waa maxay farsamooyinka faa'iido leh ee caafimaadka bini'aadamka
Horumarinta godadka tubta: soo jeedinta beerta
Faa'iidooyinka iyo dhibaatada dhirta maqaarka agagaarka indhaha. Maaskarada raashinka ee cuntada iyo dabacsan
Tamaandhada kala duwan Japan Taraawe Black - yaanyo leh sumcad wanaagsan oo loogu talagalay aqalka dhirta lagu koriyo
Fikradaha casriga ah, waxaa jira waxyaabo badan oo isbeddel ah oo lagu beeri karo ubaxyo aan caadi ahayn, ubaxyada asalka ah, oo ay weheliyaan kuwa dhaqameedka. Waxaa intaa dheer, si aad u hesho baaxadda dhulka iyo sahaminta macluumaadka ku saabsan hadda ma aha mid adag. Marka la eego arrintaan, waxaan rabnaa in aan kuu soo bandhigno wakiil kale oo ka mid ah dhirta qalaad - cilad-bixiye. Read More
Astaamaha kaydinta kaydka
Sida loo cabbiro heerkulka jirka ee lo'da: waxa caadi ah, sida loo garaaco ama kor u kaco
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Isticmaalay gawaarida yaryar 2020